Hlola i-French Riviera - World Tourism Portal
Hlola i-French Riviera
Iwebhusayithi esemthethweni yezokuvakasha yeFrance Riviera
Bukela ividiyo ekhuluma nge-French Riviera
Hlola i-French Riviera ngemizi emihle kakhulu:
ICôte d'Azur, eyake yaba indawo yabantu abacebile nabadumile kepha manje esithandwa ngokulingana nesixuku sonke. Amabhishi ayo anesihlabathi, amakhethini amahle, amawa anamadwala namadolobha amahle ayenze yaba yenye yezindawo eziyinhloko zokuhambahamba nezindawo ezihambahamba emhlabeni kanye nokuya okuthandwa abahambi abahamba ngezinyawo emhlabeni.
Kukhona i-Nice ephithizelayo, lapho ezinye izivakashi eziyizigidi ezingama-4 ngonyaka zijabulela amabhishi anamatshe futhi zihambahamba ngaphezulu kwePromenade des Anglais.
I-Avignon nge-ramparts yayo ebabazekayo nePalais-des-Papes yake yaba isihlalo sopapa.
ISanta-Tropez igcwele kakhulu ehlobo; yindawo emnandi kunoma iyiphi enye inkathi.
Kwenzeka okufanayo nakuCannes, lapho i-jet-set embonini yamafilimu ibuthana khona minyaka yonke emkhosini odumile weCannes Film Festival. Ukusuka lapho, ungagibela isikebhe uye kuma Îles de Lérins anokuthula kakhulu.
Emincane kakhulu ngosayizi kepha muhle nje (futhi iyathandwa) yidolobhana laseGourdonand Èze, elibekwe endaweni ephakeme yemitha eyi-427, efana nesidleke sokhozi. Zombili zinikeza ukubukwa okuhle kakhulu kwephaneli. Ukusuka ku-Èze, uhambo olufushane kakhulu ku-glitter nobukhazikhazi be Monaco.
Okwamakhulu ezigidi emhlabeni nabe-aristocracy, iphenathi eluhlaza yaseSaint-Jean-Cap-Ferratis isithombe sakudala esidumile nge-villa Ephrussi de Rothschild egcwele ubuciko obumangazayo njengombono wayo oyinhloko.
Ukuvakasha okungatheni nje kepha okubaluleke kakhulu ukuvakasha kungamadolobha aseGrasse, adume ngobuqhetseba bawo, kanye neBiot, eyaziwa ngamagilazi engilazi ayo.
Idolobha elikhulu nobuciko-hub eMarseilles imvamisa ayibhekwa njengengxenye yeCote D'Azur, kepha isondele kakhulu. Inokuningi okubonakalayo okungokomlando futhi eduzane kukhona amaCalan amangalisayo, uchungechunge lwefjords encane eyabelana noCassis.